Factory Tour - Zhejiang Tonva plastik machine CO., LTD
Anyị na-etinye nyocha teknụzụ na mmepe mgbe niile. Anyị nwere otu nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe ụlọ, na-onwem na a ọkachamara R & D otu, gụnyere elu igbu ịkpụzi injinia, ebu imewe injinia, igbu ịkpụzi technicians, wdg TONVA ga-mgbe niile na-enye ahịa na ịrụ ọrụ nke ọma na elu na-agba akụrụngwa.
Ebu & nhazi Onodi
TONVA nwere usoro usoro nhazi dị elu na igwe dị mma. Anyị kwenyesiri ike na ogo na ọsọ bụ isi ihe iji merie asọmpi, igwe dị elu, ọ bụghị naanị nwere ike melite ogo ahụ, kamakwa belata usoro mmepụta ma mee ka ngwaahịa ndị ahịa nwee asọmpi n'ahịa.
Nyocha 100% dị mma tupu ebuga ya.
Anyị ga-ehichapụ igwe ahụ dịka ihe onye zụrụ ya chọrọ gbasara ngwaahịa na nbipu ngbanwe .Mgbe onye zụrụ ihe gosipụtara ihe nlele ahụ, ọ ga-abanye na nnyefe ya. Ndị injinia anyị nwere ike ịga mba ofesi maka mwepu debug, onye zụrụ ahịa nwekwara ike izipu ndị injinia na ụlọ ọrụ anyị iji mụta ọrụ ahụ.